Fametrahana eveka tao Moramanga: miantso ny hanatanterahana ny hafatry ny Papa Fransoa ny Mgr Rosario | NewsMada
Fametrahana eveka tao Moramanga: miantso ny hanatanterahana ny hafatry ny Papa Fransoa ny Mgr Rosario
Mba tsy handalo fotsiny ihany…Nampahatsiahy ny hafatry ny Papa Fransoa ny eveka vaovao, ny Mgr Rosario Vella, mitantana ny diosezin’i Moramanga, ny alahady teo tany an-toerana tamin’ny toriteniny.
“Nitsodrano sy nitondra fahasoavana teto ny ray masina. Tsy tokony hohadinoina ny hafaliana sy ny fahasoavana na efa lasa aza ny Papa Fransoa. Betsaka ny adidy miandry antsika. Anisan’izany ny tokony hanombohana ny fanatanterahana ny hafatry ny Papa Fransoa”, hoy izy. Tafiditra ao anatin’izany ny fiarovana ny tontolo iainana, ny ady amin’ny kolikoly, ny fifampiresahana sy ny fihavanana ary koa ny tsy fanilihana ny hafa… Manampy ireo ny fanakaikezana ny mahantra… Eo koa ny hafatra ho an’ny tanora.
Hiaina fifankatiavana sy fahatsoram-po
Napetraka amin’ny toerany tamin’io fotoana io hisahana ny diosezin’i Moramanga ity evekan’Ambanja teo aloha ity noho ny fanendrena nataon’ny fiketrahana masina any Vatikana azy ny 8 jolay lasa teo. Navoitrany tamin’ny fampianarany koa ny lohahevitra telo niainga amin’ny vaovao mahafaly: Ny fiezahana mandray ny famindram-pon’Andriamanitra, ny fiezahana mizarazara izany ary koa miezaka ny hiaina an’i Masina Maria. “Samy manana ny tandrify azy ny tsirairay. Hiezaka ny hiaina ny fifankatiavana sy ny fahatsoram-po”, hoy ihany izy.
12 taona niasana tao Ambanja…
Efa niasa tany Toliara sy tany Betafo ny Mgr Rosario Saro nialoha ny nisahanany ny diosezin’Ambanja. Naharitra 12 taona ny niasany tao ary izao nafindra toerana any Moramanga izao indray. Miandrandra azy ny kristianina sy ny vahoaka any an-toerana satria avy amin’ny fikambanana salezianina, mitaiza sy manabe ary mikarakara tanora ny tenany. Notendren’ny Papa Fransoa ho administratera hisahana ny diosezin’Ambanja ny evekan’Antsiranana, ny Mgr Ramaroson Benjamin, araka ny fanendrena natao ny 15 septambra teo. Lasa administratera any Farafangana kosa ny eveka teo aloha, tao Moramanga, ny Mgr Gaetano Di Pierro.
Nitarika ny Sorona masina nametrahana ny eveka kosa ny kardinaly Tsarahazana Desiré ary nanolotra ny tehina ho an’ny Mgr Rosario Vella Saro.